headphone & နားကြပ်ဖြစ်ရပ်မှန်
အပြင်ဖြစ်ရပ်မှန်မှာကျနော်တို့အကောင်းဆုံးကိုသင်၏လျှောက်လွှာကိုညီဆုံးနေ့စွဲ high-end ထုံးစံအမှုပေါင်းဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ရန်။
က ISO Certificate စက်ရုံ
2014 ခုနှစ် 2008: ငါတို့သည် ISO9001 ၏စစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အထားပြသခြင်းလွန်ကတည်းကစက်ရုံစီမံခန့်ခွဲမှုတိုးတက်နှင့် systematized ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
10 နှစျကျြော '' အတွေ့အကြုံများ
လယ်ပြင်၌ 10 နှစ်ကျော်၏ကျယ်ပြန့်အသိပညာနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတူကျနော်တို့အကောင်းဆုံးထုံးစံဖြစ်ပွားမှုကိုဖန်တီးရန်ထူးခြားသောနည်းပညာများ, ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ, In-အိမ်သူအိမ်သားထုတ်လုပ်မှုနှင့်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုကိုသုံးပါ။
အရည်အသွေးနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအပေါ် 100% ကျေနပ်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်:
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များအနေဖြင့်တစ်ဦးကို 100% စိတ်ကျေနပ်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အပေါ်ကိုယျ့ကိုယျကိုဂုဏ်ယူ။
စိတ်ကြိုက်ပုံသွင်းမှုများပစ္စည်းကိရိယာများအမျိုးအစားတိုင်း fit မှဒီဇိုင်းဆွဲနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါအလွန်အမင်းအင်ဂျင်နီယာဒီဇိုင်းသက်ရောက်မှု, ဖုန်မှုန့်, နေ, အစိုဓာတ်နှင့်အခြားသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဖိစီးဆန့်ကျင်လုံခြုံရေးပေးထားပါတယ်။ အတွင်းပိုင်းအပိုကာကွယ်မှုများအတွက်ဆက်ပြောသည်နိုင်ပါသည်သင့်ရဲ့ပူးတွဲ၏အတိအကျကိုရှုထောင့်မှပုံသွင်းသို့မဟုတ်ဖြတ်အမြှုပ်သေဆုံးနိုင်ပါတယ်။
SHBC ထိပ်ဆုံးတန်း OEM ခက်ခဲ shell ကိုနဲ့ Eva ခဲယဉ်းကိစ္စကျေး ...
SHBC High-end waterpoof နဲ့ Eva အီလက်ထရောနစ်အမှု
SHBC ထိပ်တန်းတန်း shockproof ထုံးစံနဲ့ Eva Tool ကိုဖြစ်ရပ်မှန်
SHBC ရေစိုခံစိတ်ကြိုက်ခက်ခဲ shell ကို Eva ဖုံး ...
SHBC ထိပ်တန်းတန်းစိတ်ကြိုက်နဲ့ Eva ထုံးစံဇစ်အမှု
ရေစိုခံခက် Eva ကိစ္စတွင်စိတ်ကြိုက် SHBC မြင့်မားတဲ့အဆုံး
ရှန်ဟိုင်းအပြင်ဖြစ်ရပ်မှန်, 2005 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးဒီဇိုင်းကိုအပေါ်ဆက်ကပ်အပ်နှံခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ် high-end custom EVA cases. Our unwavering commitment to excellence and customer satisfaction has earned usagreat reputation world widely, isaleading global manufacturer of professional EVA carrying case solutions.
100% စိတ်တိုင်းကျ, လက်, ကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်: တစ်အရည်အသွေးကိုအမှုနှင့်သင်၏ထုတ်ကုန်မှနောက်ထပ်တန်ဖိုးများကိုပေါင်းထည့်, တစ်ဦးအမှုထက် ပို. သင့်ရဲ့ထုတ်ကုန်ပေါင်းစပ်။
တစ်ဦးကထုံးစံပုံသွင်းမှုများပျော့ပျောင်းကိစ္စတွင်၏ဘက်စုံနှင့်အလွယ်တကူသယ်ဆောင်နှင့်အတူတစ်ခက်အမှု၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုပေါင်းစပ်။ အတွင်းပိုင်းနှင့်အပြင်ပန်းနှစ်ဦးစလုံးနီးပါးမည်သည့်ပုံသဏ္ဍာန်သို့မဟုတ်အရွယ်အစားတသမတ်တည်းပုံနိုင်ပါတယ်ကြောင့် Semi-တင်းကျပ်ထုံးစံပုံသွင်းအမှုပေါင်းအဆုံးမဲ့ဒီဇိုင်းရွေးချယ်မှုများဆက်ကပ်။
custom ခရီးဆောင် shockproof တစ်လောကလုံးနဲ့ Eva ခရီးသွား ...
, Gopro သူရဲကောင်း 5,4, 3+ ဘို့ခက်ဖြစ်ရပ်မှန်ရေကိုတှနျးလှနျ ...
Gopro သူရဲကောင်းများအတွက် Shockproof waterproof အိတ်ဆောင်ဖြစ်ရပ်မှန်
GoPro သို့မဟုတ်အသေးစားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုအတွက် universal ခရီးသွားဖြစ်ရပ်မှန် ...
Gopro သူရဲကောင်း 5/4/3 + / 3/2/1 များအတွက်ဖြစ်ရပ်မှန်တင်ဆောင်လာသော
ဖုန်းနံပါတ်: + 86-512-69578809
E-mail ကို: info@beyondcase.net
နေရပ်လိပ်စာ: Ltd မှရှန်ဟိုင်းအပြင်ဖြစ်ရပ်မှန် Co. ,